မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ဖေါင့်မျိုးစုံ ~ mgkhainghtoo
21:04 မောင်ခိုင်ထူး No comments
မြန်မာဖောင့် လှလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
အရေအတွက် တော်တော်များများ ပါ ပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် ၂၀၀ ကျော်ပါပါသည်။
Flash Song ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် မြန်မာဖောင့် အလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်...တ်ာတော်လေးကို လှပါတယ်...
ကျွန်တော်တောင် အရမ်းကြိုက်ပြီးတော့သူများကိုမပေးချင်ဘူးဖြစ်နေတာ :P
လိုချင်ရင် ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ..ဖောင့် အမျိုး ၆၀ ကျော် ပါ ပါတယ်..
ကျွန်တော့် Flash Song ဆိုဒ်လေးကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.
နောက်လည်း အားရင်လည်း လာလည်ပါဦးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်....ပျော်ရွှင်ပါစေ
မဟာနှင့် Matrix ဖောင့်များ
Win fonts အစုံ
သည်မှာကတော့ အဂ်လိပ်ဖေါင့်တွေ လိုအပ်သူများအတွက်ပေါ့....ထည့်နည်းပါနော်..
ကဲ ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Flash Song ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်ဖောင့်
အလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အားလုံးပေါင်း ဖောင့် 100 ရှိပါတယ်..
အပေါ်မှာ နမူနာ ဖောင့် တစ်ခုတော့ ရေးပြထားတယ်နော် Bleeding Cowboys ဖောင့်လေးပါ..
ဒီဖောင့်လေးတွေကို ကျွန်တော် www.aungkyaw.com ကနေ ဒေါင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့
လိုင်းမကောင်းတဲ့ ကြားထဲကနေ ကိုယ်တိုင် Upload တင်ပေးထားတာပါ..လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ဖောင့်လေးတွေ ကြိုက်လို့ ဒေါင်းလိုက်ပါတယ်..
စက်ထဲကို ဘယ်လိုထည့်ရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေကြတယ်..အဲဒါလေး နည်းနည်းပြောပြပါမယ်..
ကျွန်တော်လည်း တတ်လို့ မဟုတ်ပါ..လျှောက်ကလိကြည့်ရင်းနဲ့ အဆင်ပြေသလိုလေးကို
သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြတဲ့ သဘောပါ..
( 1 ) ပထမဦးဆုံး ကွန်ပျူတာပေါ်ကို Right Click လုပ်ပြီးတော့ Personalize ကို နှိပ်ပါ။
(2) အောက်ကပုံလေးလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.. Appearance and Personalization ကို နှိပ်ပါ။
(3) အောက်က ပုံလေးလို ပေါ်လာတဲ့အခါ Fonts ကို နှိပ်ပါ။
(4) ဒေါင်းထားတဲ့ ဖောင့်ဖိုင်ကို ဖွင့်ပါ..ပြီးရင် Ctrl + A နှိပ်ပြီးတော့ ဖောင့်တွေထဲကို ဆွဲထည့်ပါ..
အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒီဖောင့်တွေ အားလုံးကို ရေးလို့ ရသွားပါပြီ..အရင်တင်ထားတဲ့ မြန်မာဖောင့်တွေကိုရော
ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ထည့်လိုက်ပါ...ကျွန်တော် လုပ်တဲ့အတိုင်း ပြောပြပေးတာပါ..အဆင်ပြေမယ်လို့လည်း
ထင်ပါတယ်..ကျွန်တော့်စက် Window7ပါ..တစ်ခြား Window Xp တို့ဘာတို့တော့ မသိပါကြောင်းးး
credit by အောင်အောင်(မကစ) ဘလော့ခရီးသည်